HomeWararka MaantaScholes: Arsene Wenger Wuu Ku Saxnaa Mesut Ozil, Aniguba In Aan La Ciyaaro Ayaan Jeclaa
Xiddigii hore ee khadka dhexe uga ciyaari jiray Manchester United ee Paul Scholes ayaa sheegay in tababaraha tababare Wenger uu ku saxsanaa in uu kooxdiisa Arsenal keeno laacibka Mesut Ozil oo uu isaguna markii uu u ciyaari jiray Man United jeclaan lahaa in uu nasiib u helo in ay wada ciyaaraan.
Wenger ayaa toddobaadkii hore si adag u weeraray hadal uu Scholes warbaahinta siiyey kaas oo uu ku tilmaamay in laacibka hore Manchester United uu bixiyey warbixin khaldan oo lid ku ah Ozil.
Scholes oo isna u jawaabayay Arsene Wenger ayaa sheegay in uu hadalkaas ku khaldanaa, waxaanu yidhi:
“Arsene Wenger ayaan ku raacay fikirkiisa Ozil laga bilaabo habeenkii Isniinta.” Sidaas ayuu yidhi Scholes markii uu si fiican u daawaday Ozil ciyaartii dhex martay Manchester United iyo Arsenal ee FA cup, taas oo ay Arsenal ku badisay 2-1.
“Tababaraha Arsenal waxa uu igu sheegay Jimcihii hore in aan jeclaan lahaa in aan garab ciyaaro Mesut Ozil, waanu ku saxsan yahay, Ozil sidii uu Old Trafford ugu ciyaaray ayuu toddobaad kasta u ciyaaraa.
“Arsenal way iga yaabisay kulankii United, waxay soo bandhigtay ciyaar dhif iyo naadir ah in la arko sannadihii u dambeeyey, waxay ahayd ciyaar la mid ah tii ay la ciyaartay Arsenal kooxda Manchester City bishii January.
“Waxay u muuqdaan kuwo af fiiqan oo guul u gaajoonaya, awood badan ku leh khadka dhexe oo ay kaga awood bateen United. Jidh ahaan waxay u ekaayeen inay ciyaarta u talinayaan, waliba waxa muhiim ahaa boos qaadashada iyo awoodda Danny Welbeck.
“Santi Cazorla iyo Francis Coquelin ayaan ciyaarta kala soo bixi lahaa fikirkayga, waligayna maan arag iyagoo sidan oo kale u xoog badan. Way degdeg badnaayeen, xamaasad badnaayeen iyagoo waliba ka wanaagsanaa Manchester United.
“Waxay tuseen kooxda Van Gaal in ay u dhutinayso khadka dhexe, kamay baqayn in ay hore u socdaan oo ay weerarka galaan marka ay ku habboon tahay” ayuu yidhi Paul Scholes.
Kenya oo xidhay masuuliyiin ka tirsan guddiga Olimbikada
27/08/2016 Abdiwahab Ahmed